Culimada Soomaaliyeed oo si kulul uga hadlay hadalkii madaxweyana Faransiiska, Emmanuel Macron | XORRIYA NEWS
Home Wararka Culimada Soomaaliyeed oo si kulul uga hadlay hadalkii madaxweyana Faransiiska, Emmanuel Macron
Culimada Soomaaliyeed oo si kulul uga hadlay hadalkii madaxweyana Faransiiska, Emmanuel Macron
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa siweyn uga hortimid hadalkii dhanka ahaa Nabbi Maxamed NNKH, waxaana ay hay’addu ku tilmaamtay hadalkaasi in uu ahaa duulaan qaawan oo lagu soo qaaday Diinta Islaamka.
“Culimada Soomaaliyeed iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ilaalinta diinta slaamka iyo danaha Muslimiinta, waxay dhaleecenayaan hadalka iyo mowqifka madaxweynaha Faransiiska,” ayuu yiri Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha ha’yadda culimada Soomaaliya oo akhrinayay bayaanka ka soo baxay shirka.
Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Abuukar (Soomow) oo ka mid ah Culimada Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in Macron “uu dhaawac u geystay diinta Islaamka isla markaana dagaalka toos ah ku qaadayo Muslimiinta”.
“Wuxuu go’aansaday in dagaal toos ah ku qaado diinta Islaamka iyo dadkeeda, Nebiga NNKH in sharaftiisa wax laga sheego waa duullaan cad oo lagu qaaday diinta Islaamka, waa duullaan lagu qaaday dhammaan Islaamka”.
Balse, Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dhankiisa sheegay in “dacaayadaha cunsurinimada iyo Islaam naceybka ah ay adeegsadaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer galbeedka, si ay u xoojiyaan danahooda siyaasadeed.”